Nepali Rajneeti | आफ्नो पोइको ह’त्यारा खोज्न नसक्ने मेरो बुढाको ह’त्यारालाई किन छाडेको
आफ्नो पोइको ह’त्यारा खोज्न नसक्ने मेरो बुढाको ह’त्यारालाई किन छाडेको
फागुण १०, २०७७ सोमबार १४०६ पटक हेरिएको
विनु रायमाझी पौडेलले भनिन्– राष्ट्रपतिले आफ्नो श्रीमान्को ह’त्यारा खोज्न सक्नुभएन ।
अर्की महिलाको श्रीमान्को ह’त्यारा पत्ता लाग्दासमेत आममाफी दिनुभएको छ । हामी यसमा धेरै चिन्तित छौँ ।
किन न्याय हराएको भयो यो देश ? ह’त्यारालाई राष्ट्रपतिबाट नै आममाफी हुन्छ भने जनताले के सोच्ने ?
हामीले कसरी न्याय पाउँछौँ अब ? न्याय पाउन के गर्नुपर्छ ?
तरुण दल चितवनका तत्कालीन अध्यक्ष शिवप्रसाद पौडेलकोे ह’त्यामा जे’ल स’जाय भोगिरहेका तीनजनालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आममाफी दिएकोमा परिवारले आ’क्रोश पोखेको छ ।
भरतपुरमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिवारका सदस्यले सत्ता र शक्तिको आडमा राष्ट्रपति भण्डारीले ह’त्याका दो’षीलाई सफाइ दिएकोमा अस’न्तुष्टि जनाए ।
सर्वस्वसहित जन्मकै’द फै’सला भएका आठजनामध्ये सुनील केसी, फणीन्द्र श्रेष्ठ र दिलबहादुर मोक्तानलाई प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा आममाफी दिइएको छ ।
आममाफी नदिइएको भए केसी २० असार ०८७, श्रेष्ठ २३ साउन ०८७ र मोक्तान ३ भदौ ०८७ सम्म का’रागारमै रहनुपर्ने थियो । सरकारको सिफारिसमा आ’ममाफी पाउने तीनैजना नेकपा ओली समूहका समर्थक हुन् ।
छुटेका तीनैजना तत्कालीन नेकपा एमालेको युवा संघका कार्यकर्ता हुन् । मृ’तक शिवकी पत्नी विनु रायमाझी पौडेल, उनका १६ वर्षीय छोरा सिबिनजंग, दाजु तारानाथ र भाइबुहारी रीताले राष्ट्रपति भण्डारीले आम’माफी दिएकोमा वि’रोध गरे ।
विनुले ह’त्याको मुद्दामा का’रागार रहेका व्यक्तिलाई प्रजातन्त्रकै खिल्ली उडाउँदै आममाफी दिइएको र यसले आफूहरूमाथि अन्याय भएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘अप’राधी जे’ल गएर पश्चा’त्ताप गर्दै थिए । कैद सजाय भुक्तान गरेपछि छुट्नु स्वाभाविक थियो, तर पहिले नै छुट्नु पी’डितमाथि अन्याय भयो ।’
विनुले नेकपा फुटेपछि कार्यकर्ता बढाउन प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आम’माफी दिएको आ’रोप लगाइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले आफू नारी भएर पनि अन्य नारीको मर्म नबुझेको उनले गुनासो गरिन् । ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले आफ्नो पार्टीको सदस्य भयो भन्दैमा अप’राधीलाई आम’मा’फी दिने ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
उनले राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रश्न गरिन्, ‘उहाँ (राष्ट्रपति)ले आफ्नो श्रीमान्को ह’त्यारा खोज्न सक्नुभएन । अर्की महिलाको श्रीमान्को ह’त्यारा पत्ता लाग्दासमेत आममा’फी दिनुभएको छ । हामी यसमा धेरै चिन्तित छौँ ।
किन न्याय हराएकोे भयो यो देश ? ह’त्यारालाई राष्ट्रपतिबाट नै आममाफी हुन्छ भने जनताले के सोच्ने ? हामीले कसरी न्याय पाउँछौँ अब ? न्याय पाउन के गर्नुपर्छ ?’
शिवका भाइ गोविन्द पौडेलको पनि ३ जेठ ०६६ मा सार्वजनिकस्थलमै आक्र’मणपछि मृ’त्यु भएको थियो ।
भाइको ह’त्या अभि’योगमा थुनिएका बन्दीहरूको एउटा समूहले २० मंसिरमा भरतपुर कारा’गारमा गरेको आक्र’मणबाट सख्त घाइते तरुण दल चितवनका अध्यक्ष शिवको काठमाडौंस्थित न्युरो अस्पतालमा उपचार गर्दागर्दै २ पुसमा मृ’त्यु भएको थियो ।
चितवन केराबारीमा सञ्जय लामाको ह’त्या भएपछि पौडेलवि’रूद्ध ह’त्या अभि’योगमा उ’जुरी थियो ।
अभि’योगमै पौडेल पु’र्पक्षका लागि भरतपुर कारा’गारमा थु’नामा थिए । तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले शिवलाई सहिद घोषणा गरेको थियो ।
यस विषयमा नेपाल तरुण दलले पनि आ’पत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । नयपतृका